Sorakaliana no Nahazoan’i Aoyagi Bisen Tao Japana Mpanjohy Tao Amin’ny Media Sosialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Oktobra 2017 5:01 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, русский, नेपाली, 繁體中文, Italiano, English
Mpikaly soratra Japoney Bisen Aoyagi tao amin'ny Fampirantiana Japoney tao Thailandy ny taona 2016. Pikantsary avy amin'ny Fantsona YouTube ofisialin'i Bisen Aoyagi .
Nanaporofo ny sioka iray nalaza be vao haingana fa tena sarobidy amin'ny kolontsaina malaza Japoney ny zavakanton'ny soratra ary nahazo mpakafy maro ny mpanao sorakaliana ara-javakanto iray vao misondrotra iray noho ny maha-izy azy sy ny fitiavan-tsoratra.
Tamin'ny tapaky ny volana septambra, namoaka lahatsary tao amin'ny kaontiny Twitter i Aoyagi Bisen izay nampiseho ny fomba fanoratana ilay heverina ho iray amin'ireo tarehin-tsoratra Shinoa manjavozavo sy sarotra indrindra: biang, izay nampiasaina manokana rehefa manoratra ny “paty biangbiang” amin'ny teny Mandaraina.
Avy amin'ny fomba fijerin'ny olona rehetra zatra ny fanoratana tarehintsoratra Shinoa, fantatra amin'ny teny Japoney hoe kanji dia tena sarotra ny soratra hoe biang, izay mila tsipika miisa 56 rehefa manoratra izany.
Nozaraina tao amin'ny Twitter mihoatra ny in-149.000 hatreto ny lahatsarin'i Aoyagi .
Indro ny tarehin-tsoratra Shinoa iray izay lazaina fa tena sarotra indrindra. Nampiasaina tao Shina izany! ( ´ ▽ ` )ﾉ Mivaky hoe ” biang “ny tarehin-tsoratra, ary ampiasaina rehefa manoratra ny anaran'ny sakafo paty fantatra amin'ny anarana hoe biangbiang-men(^ ^).
Nosoratana tamin'ny fampiasana ny Borosy Bisen Bisen ôrizinaly sy ny taratasy hanshiyo ny tarehintsoratra .
Amin'ny sioka miisa 52 monja vitany hatramin'izao, toy ny mbola zazavao ihany i Aoyagi, 27 taona, ao amin'ny Twitter, noho izany tena zava-malaza an-tserasera tokoa ny siokany “biang”. Teraka tao Osaka i Aoyagi, nilaza izy tao amin'ny filazalazana momba ny tantaram-piainany ofisialy fa nanomboka nianatra ny fikaliana soratra Japoney avy tamin'ny renibeny nanomboka tamin'ny faha-efa-taonany .
Nomena fahazoan-dàlana ho mpampianatra sorakaliana izy fony 17 taona, ary nanohy ny fianarany ity zavakanto ity hatrany hatramin'izao fotoana. Ankehitriny, miasa ary efa mpikaly soratra matihanina i Aoyagi , manao fampirantiana manerana izao tontolo izao, misolontena an'i Japana, sady mivarotra ny marikany manokana momba ny famokarana sorakaliana.
Indro ny sarintavako vaovao.
Tao amin'ny Twitter, mandefa lahatsary fohy tsy tapaka i Aoyagi momba ny fampisehoana sorakaliana tsara tarehy.
Indraindray dia manome torolalana sy lesona amin'ny fikaliana soratra tonga lafatra Japoney izy.
Ahoana ny fomba fanoratana ny tarehin-tsoratra Shinoa tsara tarehy.
Ary manome fampisehoana matihanina izay mitovitovy kokoa amin'ny zavakanto sarotra vinavinaina i Aoyagi amin'ny fotoana hafa. Ao anatin'ity sioka ity, nanao fanamby ny hanoratra ny tsipika miisa 108 sarotra vinavinaina izay ahitana singa kanji samihafa i Aoyagi .
Kanji iray ahitana tsipika miisa 108.
Fotoana sarotra eto handroahana ny “faniriana an-tany”. Moa ve tsy mahafinaritra raha toa ka afaka manoratra izany ao anatin'ny iray minitra na latsaka aho?
Araho i Aoyagi Bisen ao amin'ny Twitter sy Instagram raha hijery ny asakanto maromaro kokoa sy ny fampisehoana ny fanoratana kanji. Manasongadina ny antsipiriany sasany amin'ny fikaliany soratra ihany koa ny tranonkalany , ary misy amin'izany no amidy.